Mpivady Ao Singapaoro Notsaraina Fa Toa Hoe Nahamosarena Vehivavy Filipina Mpiasa An-trano Nandritra ny 15 volana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2016 17:35 GMT
Sary famantarana ny Facebook-n'i Thelma Oyasan Gawidan
Nabaribarin'ny fitsarana iray eo dalam-panatanterahana, nahavoaroiroy mpivady Singapaoreana sy ny fitondràny ny mpiasa an-trano mpifindra monina izay nampiasain'izy ireo, ny fanararaotana sy ny fanilikilihana izay atrehan'ny mpiasa vavy mpifindra monina maro ao amin'ilay tanàna-firenena manankarena.
Lim Choon Hong, mpivarotra, dia voampanga ho nanitsakitsaka ny fitsipiky ny Fampiasàna Mpiasa Vahiny 2012 (Fahazoandalana Hiasa) , tsy nanome an'i Thelma Oyasan Gawidan sakafo sahaza. Voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ilay heloka bevava i Foon Chong Sui, vadiny.
Milaza i Gawidan fa tsy nanome azy afa-tsy mofo tsotra sy paty mora ahandroina ny mpampiasa azy, ary ny lanjany izay 49kg dia nihena ho 29kg tao anatin'ny 15 volana fotsiny.
Efa ela i Singapore no noraisina ho toerana tsara aleha ho an'ny maro any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina mitady anjara mba hahazoana fidiram-bola tsaratsara kokoa ho an'ny fianakaviany. Tamin'ny Jona 2015, misy olona 993.900 no manana fahazoan-dalana hiasa any Singapaoro, anisan'izany ireo miasa toy ny mpiasa an-trano sy ny mpiasa amin'ny fanorenan-trano amin'ny toerana manerana ny firenena. Maro amin'ireo lehilahy sy vehivavy ireo no avy amin'ny firenena toa an'i Bangladesy, India, Filipina, Indonezia ary Myanmar.
Ankoatra ny fandàvana tsy hanome sakafo ampy ho azy, nijoro ho vavolombelona teo anatrehan'ny fitsarana ihany koa i Gawidan fa anaovan'ny mpampiasa azy fanaraha-maso foana izy, ka na ny fandroany aza dia arahan'i Chong maso. Na dia mipetraka amin'ny tranobe avo lenta iombonana aza ny fianakaviana, akaikin'ny faritra tena fanaovana raharaham-barotra ao Singapore, nilaza izy fa indray mandeha na indroa isan-kerinandro ihany no navela handro, any amin'ny trano fidiovam-bahoaka ao anatin'ilay fonenana iombonana.
Notazonin'ireo mpivady ihany koa ny findainy sady nohidiny, mba tsy nahafahany nifandray tamin'ny fianakaviany any Filipina. Nanasorana taminy ny ampahany betsaka ny karamany, hoy i Gawidan; nilaza ny mpampiasa azy fa amin'ny toerana azo antoka ilay izy.. Mitarika fibedesana ny fiezahana hifandray amin'ny hafa.
“Jereny foana aho amin'ny hetsika rehetra ataoko ao an-trano, bedesiny raha manao hadisoana,” hoy izy tamin'ny fitsarana.
Mety handoa sazy hatramin'ny S$10.000 (US$7.110), 12 volana an-tranomaizina, na ireo roa mitambatra i Chong sy i Lim, raha voaheloka.
‘Azo antoka fa afaka manao tsaratsara kokoa isika?’
Tena marefo amin'ny fanararaotana sy ny fanambakàna ireo mpifindra monina mpiasa an-trano ao Singapaoro. Voahilika amin'ny Lalanan'ny Asa izy ireo – izay miresaka ny fepetra momba ny asa toy ny asa ambony ampanga, sy manome safidy ara-dalàna mba hanafoana ny fandroahana tsy an-drariny, ankoatr'izay tsy voatanisa – ary tsy maintsy monina ao an-tranon'ny mpampiasa azy. Mitaky andro iray tsy fiasana isan-kerinandro homena ny mpiasa an-trano i Singapaoro, maro no mbola nandà izany zo izany.
Nanindry mafy ny olana ara-drafitra izay mitondra ho amin'ny fanararaotana ny mpiasa an-trano ireo mpaneho hevitra tamin'ny media sosialy. Nanamarika i Kokila Annamalai fa tsy voafaritra ho toy ny fanitsakitsahana ny zon'i Gawidan ny fiampangana atao amin'ireo mpampiasa, fa tsy fahombiazana amin'ny “fikarakaràna” azy:
Manara-maso ny fisasàny, tsy manome sakafo azy, mamizana azy hatramin'ny fampijaliana (anisan'izany ny indray mandeha naharitra efa ho 72 ora mitohy), tsy famelàna hatory, mandà ny fahazoana fidiovana fototra – ary voampanga ho tsy nahatanteraka ny “fikarakaràna” azy ireo nanao izany. Teo imason'ny MOM [Ministeran'ny Monpower], ny polisy ary ny fitsarana, tsy fanararaotana na fandikàna miharihary ny zon'olombelony izany. Tsy afaka ny ho solika amin'ny milinareo ny heloka bevava..
Mora kokoa ny mino fa olona masiaka mahatsiravina ireo nanao ny fampijaliana, ka ny fampidirana azy ireo an-tranomaizina mandritra ny fotoana ela no hamaha ny olana, nefa mandra-paneken'ny maro fa ny mpifindra monina mpiasa an-trano ao Singapaoro, monina sy miasa eo ambany fitsipi-panjakana izay mametraka azy mivantana amin'ny toeran'ny andevo fehezin'ny fifanekena, ary ny olona maro izay miloa-peo mba hitakiana fanavaozana, mijanona ho marefo amin'ny fanararaotana feno habibiana ireo mpiasa an-trano.
Nanampy koa ny hafa fa tsy tranga miavaka ny nanjo an'i Gawidan. Naneho hevitra tamin'ny fàhan'ny Facebook-n'ny gazety ao an-toerana The Straits Times i Christopher Shelley ka nanoratra mikasika ny fomba nataon'ny mpiasa an-tranony nanome fanampiana ny mpiasa iray hafa eo amin'ny manodidina:
Tsy tranga manokana izany… Fony nonina tany Singapaoro tao Rochalie Drive izahay nandritra ny taona vitsivitsy – lalana iray tena manankarena – ny vehivavy mpiasa an-tranonay dia nanolotra sakafo mangingina mihoatra ny fefy ho an'ny mpiasa an-tranon'ny mpiara-monina aminay, izay tsy maintsy mandoa ny sakafony sy ary nandray ny antsasaky ny karama nandoavanay ny anay…tsy nanaiky ny hanaovanay tatitra ho any amin'ny mpampiasa izy raha toa ka ho voaroaka any Singapaoro izy…
Namaly ny adihevitra ny mpakasary fanao an-gazety, Sim Chiyin, fa mety ho ratsy lavitra noho izany ny fitondrana ny mpiasa an-trano mpifindra monina any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao:
Marina fa misy any an-kafa ny tranga tena ratsy indrindra amin'ny fanararaotana ara-batana, firaisana ara-nofo, ara-pihetsehampo, indrindra fa any Afovoany Atsinanana — famerenana iombonana iray hafa izay reko amin'ny maha mpanao gazety momba ny olana arak'asa ahy. Misy foana ny ohatra azo raisina eo amin'ny asa fanaovana gazety, ary efa nanome tahirin-kevitra maro mikasika izany aho ao amin'ny faran'ny bokiko.
Nefa azo antoka fa tiantsika ny mampitaha ny tenantsika amin'ny tsara indrindra fa tsy amin'ny mpizara kely indrindra iombonana. Azo antoka fa afaka manao tsaratsara kokoa ve isika?